साल्ट ट्रेडिङले ल्यायो सहुलियत पसल सञ्चालनमा
काठमाडौं– सरकारले नेपालीहरुको महान चाड दशैं, तिहार र छठ पर्वलक्षित सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको सहकार्यमा साल्ट ट्रेडिङ, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र दुग्ध विकास संस्था (डीडीसी)मार्फत सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
चाडपर्वको अवसरमा उपभोक्तालाई सहुलियत दिने उद्देश्यसहित सरकारले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको वाणिज्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले बताए । उनले सहुलियत मूल्य पसलले बजारमा हस्तक्षेप नभइ दशैं तिहारका बेलामा उपभोक्तालाई बजारको अवस्थाबारे जानकारी दिने बताए ।
‘यो सुपथ मूल्य पसल होइन, सुपथ मूल्य पसल सधैं सञचालनमा हुन्छन्’ उनले भने, ‘यो सहुलियत मूल्य पसल हो । यसले बजार हस्तक्षेप भन्दा पनि बजारमा सिग्नल दिन्छ । यो वस्तुको मूल्य यो हो है भनेर जानकारी दिन्छ ।’
सोमवारदेखि सञ्चालनमा आएका सहुलियत मूल्य पसल मुलुकभरि ७३ स्थानमा सञ्चालनमा आउने उनले बताए ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले काठमाडौं उपत्यकामा ११ वटा र उपत्यका बाहिर २४ वटा सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याउनेछ । मुलुकभरि साल्ट्रेडिङका ३५ वटा पसल रहनेछन् । त्यस्तै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले २३ वटा र डीडीसीले १५ वटा सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याउने छन् ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकामा ५ स्थानमा र उपत्यका बाहिर १८ स्थानमा पसल सञ्चालन गर्नेछ । त्यस्तै डिडिसीले काठमाडौं उपत्यकामा ४ स्थानमा र उपत्यका बाहिर ११ स्थानमा यस्ता पसल सञ्चालनमा ल्याउने छ ।
उपत्यकामा यस्ता पसलहरू कालीमाटी, कोटेश्वर, टेकु, रामशाह पथ, सतुंगल, ललितपुर, भक्तपुर लगायतका स्थानमा रहने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सहुलियत पसलमा चिनीमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ, नूनमा प्रतिकिलो २ रुपैयाँ, घिउमा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ, खसी बोकामा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिइने वाणिज्य आपुर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले जानकारी दिए ।
खसी, बोका ढुवानीका लागि टेन्डर प्रक्रिया शुरू भएको गौचनले बताए । सुहलियत पसल आगामी १६ कार्तिकसम्म सञ्चालनमा रहने छन् ।
उपभोक्तालाई राहतः मन्त्री
यसैबीच उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवले सहुलियत मूल्य पसलले उपभोक्तालाई राहत मिल्ने बताएका छन् । सुपथ मूल्य पसलको उद्घाटन कार्यक्रममा सहुलियत मूल्य पसलको उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री यादवले यस्तो बताएका हुन् ।
किसान र उपभोक्तालाई भगवान तथा व्यापारीलाई उजेली उच्चारण गरेका मन्त्री यादवले भगवान दुब्लाउँदै गएका र उजेली मोटाउँदै गएको बताए । ‘भगवान दुब्लाउँदै जाने र उजेली मोटाउँदै प्रचलन छ’ मन्त्री यादवले भने, ‘त्यस्तो नहोस् दशैं चाहिँ सबैको सुखद होस् ।’
यसअघि डीडीसीका आयोजना प्रमुख राजेन्द्र अधिकारीले डिडिसीको सुपथ मूल्य पसलबारे जानकारी दिँदै किसान र उपभोक्तालाई धन्यवनद दिएका थिए ।
किसान र उपभोक्ता भगवान भएको र दुवैको सहयोगले डिडिसीले सजिलै दुध पाउने तथा विक्री गर्न सहज भएको अधिकारीले बताए ।
सोही प्रसंग कोट्याउँदै मन्त्री यादवले उद्योगीलाई उजेलीको संज्ञा दिँदै भगवान दुब्लाउने र उजेली मोटाउने प्रचलनको अन्तको आपेक्षा गरिएको बताए ।
यस्तो छ साल्टट्रेडिङको मूल्य-
उपभोक्ता आत्तिँदा पम्पमा भीड, आयल निगम भन्छ– 'दशैंमा इन्धन विक्री खुला'
सुनको भाउ बढ्यो, कति छ आज मूल्य ?
सुनको भाउ झनै घट्यो, कति छ आजको मूल्य ?
सुनचाँदीको भाउ बढ्यो, कति छ आज मूल्य ?
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्ध थप समृद्ध हुनेछ : डा. प्रकाशशरण महत (अन्तर्वार्ता) पूरा पढ्नुहोस
दशैंमा आशीर्वादको खात र त्यसको धरातल ! पूरा पढ्नुहोस
यसकारण खुइलिन्छ कम उमेरमै तालु, यस्तो छ उपचार आजकल धेरै मानिसमा तालु खुइलिने समस्या छ । महिला र पुरुष दुवैमा यस्तो समस्या देखिन्छ । तनावमा हुँदा वा तौल कम हुँदा अनि कुनै गम्भीर रोग लाग्दा मानिस तालु खुइलिने समस्यामा पर्छन् ...
खाली पेटमा लसुन खानुका फाइदा
टन्सिलले सतायो ? निको बनाउन अपनाउनुस् यी घरेलु उपाय
अपडेटः भिक्ट्री लाउन्जबारमा लागेको आगो नियन्त्रणमा, एक जना घाइते
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा नवदुर्गा नाच अवलोकन